Afọ asaa nke nnwale Archives - Okwu di ugbu a
Nnwale Afọ Asaa - Nkebi nke Abụọ
Ihe na June 16, 2008 March 12, 2021 by Mark
Apọkalips, nke Michael D. O'Brien dere
Mgbe ụbọchị asaa ahụ gwụchara,
mmiri nke iju mmiri ahụ bịara n’elu ụwa.
(Jenesis 7: 10)
I chọrọ ikwu n'ime obi gị oge maka idebe usoro ndị ọzọ.
Afọ atọ gara aga bụụrụ m njem dị ịrịba ama, nke m na-ebuteghị ume ịmalite. Anaghị m azọrọ na m bụ onye amụma… naanị onye ozi ala ọzọ dị mfe nke na-enwe mmetụta na-akpọ oku ka anyị wee mụtakwuo ìhè ụbọchị anyị bi na ya na ụbọchị ndị na-abịa. Ọ baghị uru ikwu, nke a abụrụla ọrụ karịrị akarị, ma bụrụkwa nke a na-eji oke egwu na ima jijiji eme. Ma ọ dịkarịa ala, m na-akọrọ ndị amụma! Ma a na-eme ya site na nkwado nkwado dị ukwuu nke ọtụtụ n'ime unu ji amara nye m n'aha. A na m eche ya. Achọrọ m ya. Enwere m nnukwu ekele.
Ọnwụnwa nke afọ asaa - Nkebi nke atọ
Ihe na June 17, 2008 March 28, 2020 by Mark
"Obi Abụọ" nke Tommy Christopher Canning
IKPEHE III na-enyocha mmalite nke Nnwale Afọ Asaa na-eso nhie ahụ.
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke anọ
Ihe na March 29, 2010 September 17, 2017 by Mark
Afọ asaa ga-agafe n’iru gị, rue mgbe ị ga-amata na Onye Kasị Elu na-achị alaeze nke mmadụ ma na-enye ya onye ọ chọrọ. (Dan 4:22)
N'oge Mass nke a gara aga Passion Sunday, achọpụtara m na Onyenwe anyị na-agba m ume ka m degharịa otu akụkụ nke Ikpe Asaa ebe o bu n'isi malitere na Passion of the Church. Ọzọkwa, ntụgharị uche ndị a bụ mkpụrụ nke ekpere n’onwe m iji ghọtakwuo nkuzi Churchka na Isi nke Kraịst ga-eso Onye isi ya site n’ọchịchọ nke ya ma ọ bụ “ikpe ikpe ikpeazụ,” ka ndị Catechism si kwuo ya. (CCC, 677). Ebe ọ bụ na akwụkwọ Mkpughe kwuru otu akụkụ na ikpe ikpe ikpeazụ a, achọpụtara m ebe a ịkọwa nkọwa nke Apocalypse nke St John tinyere ụkpụrụ nke Obi ọmịiko Kraịst. Onye na-agụ ya kwesịrị iburu n’uche na ndị a bụ echiche nke aka m na ọ bụghị nkọwa doro anya nke Mkpughe, nke bụ akwụkwọ nwere ọtụtụ nkọwa na akụkụ ya, ọ bụghị nke kachasị, nke eschatological. Otutu nkpuru obi di nma adabala na ugwu di elu nke Apocalypse. Otu o sila dị, ahụwo m ka Onye-nwe na-amanye m ije ije n'okwukwe site n'usoro a, na-ejikọ nkuzi nke Nzukọ-nsọ ​​ọnụ na mkpughe dị omimi na olu nwere ikike nke Ndị Nna Dị Nsọ. M na-agba onye na-agụ ya ume ka o jiri nghọta ha mee ihe, nke Magisterium na-akụzi ma na-eduzi.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke V
Ihe na March 30, 2010 September 17, 2017 by Mark
Kraịst nọ na Getsemane, nke Michael D. O'Brien dere
Umu Israel mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova; Onye-nwe nyefere ha n’aka afọ asaa n’aka Midian. (Ndị Ikpe 6: 1)
NDỊ a ederede na-enyocha ntughari n'etiti ọkara nke mbụ na nke abụọ nke Nnwale Afọ Asaa.
Anyị na-eso Jizọs tinyere Mmasị Ya, nke bụ ụkpụrụ maka Nnukwu Ọnwụnwa nke ugbu a na nke na-abịa. Ọzọkwa, usoro isiokwu a kwekọrọ na Mmasị Ya na Akwụkwọ nke Mkpughe nke bụ, n'otu n'ime ọtụtụ akara akara, a Akwa Mass a na-enye ha n’eluigwe: ihe nnọchianya nke Mmasị Kraịst dịka ha abụọ uwa na mmeri.
Ọnwụnwa asaa nke afọ - Nkebi nke Isii
Ihe na March 31, 2010 September 17, 2017 by Mark
Ihe opupu, nke Michael D. O'Brien dere
Ruo ụbọchị asaa, ị ga-eri achịcha na-ekoghị eko. (Ọpụpụ 12:15)
WE gaa n’iso na-eso Ọmịiko nke Kraịst — ụkpụrụ maka ọnwụnwa nke ugbua na nke na-abịa. Ihe odide a na-ele anya n'ụzọ zuru ezu karị na otú a Judas — onye na-emegide Kraịst-ga-ebili na ike.
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke VII
Ihe na April 1, 2010 September 17, 2017 by Mark
Okpueze, Ogwu, nke Michael D. O'Brien dere
Fụọnụ opi na Zayọn, + tiekwanụ n’elu ugwu nsọ m. Ka ndi nile bi n'ala nka ma jijiji: n'ihi na ubọchi Jehova nābia. (Joel 2: 1)
THE Ìhè ga-eweta oge nke izisa ozi ọma nke ga-abịa dịka ide mmiri, oke Iju Mmiri nke ebere. Ee, Jizọs, bịa! Bịa n'ike, ìhè, ịhụnanya na ebere!
Mana ka anyị ghara ichefu, na Ìhè bụkwa a ịdọ aka ná ntị na ụzọ nke ụwa na ọtụtụ n’ime Nzukọ-nsọ ​​n’onwe ha họrọwooro ga-eweta nsonaazụ dị egwu na ihe mgbu n’elu ụwa. Ihe omuma a ga - esochi ịdọ aka na ntị obi ebere ọzọ nke ga - amalite ịpụta na cosmos n'onwe ya…
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke Asatọ
Ihe na April 2, 2010 September 17, 2017 by Mark
“A mara Jizọs ikpe ọnwụ maka Paịlet”, nke Michael D. O'Brien dere
N’ezie, Onye-nwe-anyị Chineke anaghị eme ihe ọbụla ma ọbụghị ikpughe atụmatụ ya nye ndị odibo ya, ndị amụma. (Emọs 3: 7)
Onye-nwe na-ezipụ Ndịàmà abụọ n’ime ụwa ka ha kpọọ ha ka ha chegharịa. Site n’ebere a, anyị ahụ ọzọ na Chineke bụ ịhụnanya, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ma bụrụ onye ọgaranya na ebere.
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke IX
Ihe na April 3, 2010 September 17, 2017 by Mark
Ogwu, nke Michael D. O'Brien dere
Chọọchị ga-abata n'ebube nke alaeze naanị site na ngabiga ikpeazụ a, mgbe ọ ga-eso Onye-nwe ya n'ọnwụ na Mbilite n'Ọnwụ ya. -Catechism nke Chọọchị Katọlik, 677
AS anyị na-aga n'ihu ịgbaso Mmasị Ahụ nke Ahụ gbasara Akwụkwọ nke Mkpughe, ọ dị mma icheta okwu anyị gụrụ na mbido akwụkwọ ahụ:
Ngọzi na-adịrị onye na-agụpụta ma ngọzi na-adịrị ndị na-ege ntị n'okwu amụma a ma na-ege ntị n'ihe e dere n'ime ya, n'ihi na oge ahụ a kara aka dị nso. (Mkpu 1: 3)
Ya mere, anyị na-agụ, ọ bụghị na mmụọ nke ụjọ ma ọ bụ ụjọ, kama na mmụọ nke olile anya na atụmanya nke ngọzi nke na-abịara ndị "na-ege ntị" ozi bụ isi nke Mkpughe: okwukwe na Jizọs Kraịst na-azọpụta anyị pụọ n'ọnwụ ebighị ebi wee nye anyị kerita ihe-nketa nke ala eze eluigwe.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ọnwụnwa afọ asaa - Nkebi nke X
Ihe na April 4, 2010 February 13, 2020 by Mark
Jizọs Si n’Obe Obe Ebube, nke Michael D. O'Brien dere
Banye n'ụgbọ ahụ, gị na ezinụlọ gị niile. Daysbọchị asaa gawa, m ga-eme ka mmiri zoo n'elu ụwa ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị. (Jen 7: 1, 4)
IHE OGUGU NKE ALA
Site na agba nke asaa wee wụsa, ikpe nke Chineke n'isi alaeze anụ ọhịa ahụ na-eru njedebe ya.
AKWUKWO OGUGU (254)
Archives Họrọ net Ike 2022 (1) Eprel 2022 (2) Machị 2022 (5) Febụwarị 2022 (5) Jenụwarị 2022 (7) Disemba 2021 (7) Nọvemba 2021 (7) Ọktọba 2021 (6) Septemba 2021 (5) Ọgọstụ 2021 (5) Julaị 2021 (3) June 2021 (2) Ike 2021 (6) Eprel 2021 (6) Machị 2021 (9) Febụwarị 2021 (10) Jenụwarị 2021 (9) Disemba 2020 (9) Nọvemba 2020 (8) Ọktọba 2020 (15) Septemba 2020 (6) Ọgọstụ 2020 (6) Julaị 2020 (11) June 2020 (13) Ike 2020 (9) Eprel 2020 (11) Machị 2020 (12) Febụwarị 2020 (7) Jenụwarị 2020 (10) Disemba 2019 (7) Nọvemba 2019 (11) Ọktọba 2019 (7) Septemba 2019 (6) Ọgọstụ 2019 (1) Julaị 2019 (4) June 2019 (6) Ike 2019 (9) Eprel 2019 (15) Machị 2019 (5) Febụwarị 2019 (9) Jenụwarị 2019 (7) Disemba 2018 (3) Nọvemba 2018 (10) Ọktọba 2018 (8) Septemba 2018 (5) Ọgọstụ 2018 (4) Julaị 2018 (2) June 2018 (6) Ike 2018 (13) Eprel 2018 (10) Machị 2018 (8) Febụwarị 2018 (13) Jenụwarị 2018 (11) Disemba 2017 (10) Nọvemba 2017 (10) Ọktọba 2017 (11) Septemba 2017 (9) Ọgọstụ 2017 (11) Julaị 2017 (9) June 2017 (9) Ike 2017 (10) Eprel 2017 (8) Machị 2017 (9) Febụwarị 2017 (8) Jenụwarị 2017 (9) Disemba 2016 (14) Nọvemba 2016 (13) Ọktọba 2016 (6) Septemba 2016 (15) Ọgọstụ 2016 (7) Julaị 2016 (6) June 2016 (8) Ike 2016 (10) Eprel 2016 (7) Machị 2016 (25) Febụwarị 2016 (21) Jenụwarị 2016 (8) Disemba 2015 (7) Nọvemba 2015 (9) Ọktọba 2015 (11) Septemba 2015 (9) Ọgọstụ 2015 (5) Julaị 2015 (8) June 2015 (8) Ike 2015 (9) Eprel 2015 (9) Machị 2015 (27) Febụwarị 2015 (17) Jenụwarị 2015 (11) Disemba 2014 (10) Nọvemba 2014 (7) Ọktọba 2014 (21) Septemba 2014 (21) Ọgọstụ 2014 (6) Julaị 2014 (6) June 2014 (5) Ike 2014 (19) Eprel 2014 (22) Machị 2014 (26) Febụwarị 2014 (24) Jenụwarị 2014 (27) Disemba 2013 (24) Nọvemba 2013 (6) Ọktọba 2013 (5) Septemba 2013 (3) Ọgọstụ 2013 (2) Julaị 2013 (4) June 2013 (1) Ike 2013 (6) Eprel 2013 (7) Machị 2013 (11) Febụwarị 2013 (10) Jenụwarị 2013 (3) Disemba 2012 (2) Nọvemba 2012 (3) Ọktọba 2012 (3) Septemba 2012 (5) Ọgọstụ 2012 (1) Julaị 2012 (3) June 2012 (5) Ike 2012 (2) Eprel 2012 (5) Machị 2012 (5) Febụwarị 2012 (7) Jenụwarị 2012 (6) Disemba 2011 (8) Nọvemba 2011 (6) Ọktọba 2011 (7) Septemba 2011 (3) Ọgọstụ 2011 (5) Julaị 2011 (4) June 2011 (9) Ike 2011 (4) Eprel 2011 (1) Machị 2011 (4) Febụwarị 2011 (3) Jenụwarị 2011 (7) Disemba 2010 (7) Nọvemba 2010 (5) Ọktọba 2010 (5) Septemba 2010 (5) Ọgọstụ 2010 (3) Julaị 2010 (5) June 2010 (7) Ike 2010 (9) Eprel 2010 (14) Machị 2010 (8) Febụwarị 2010 (9) Jenụwarị 2010 (5) Disemba 2009 (8) Nọvemba 2009 (6) Ọktọba 2009 (5) Septemba 2009 (4) Ọgọstụ 2009 (4) Julaị 2009 (7) June 2009 (7) Ike 2009 (5) Eprel 2009 (8) Machị 2009 (2) Febụwarị 2009 (8) Jenụwarị 2009 (13) Disemba 2008 (10) Nọvemba 2008 (9) Ọktọba 2008 (11) Septemba 2008 (10) Ọgọstụ 2008 (7) Julaị 2008 (2) June 2008 (5) Ike 2008 (7) Eprel 2008 (8) Machị 2008 (10) Febụwarị 2008 (7) Jenụwarị 2008 (5) Disemba 2007 (12) Nọvemba 2007 (9) Ọktọba 2007 (5) Septemba 2007 (10) Ọgọstụ 2007 (8) Julaị 2007 (5) June 2007 (5) Ike 2007 (6) Eprel 2007 (7) Machị 2007 (4) Febụwarị 2007 (6) Jenụwarị 2007 (10) Disemba 2006 (9) Nọvemba 2006 (10) Ọktọba 2006 (10) Septemba 2006 (24) Ọgọstụ 2006 (19) Julaị 2006 (16) June 2006 (21) Ike 2006 (17) Eprel 2006 (19) Machị 2006 (22) Febụwarị 2006 (16) Jenụwarị 2006 (16) Disemba 2005 (10) Nọvemba 2005 (1) June 2005 (1) Eprel 2003 (1) Machị 2003 (1)